Zvakanakisa Zvigadzirwa Kubva kuChina Kwakanaka Mutengo Polyester Polystyrene Rakasonererwa Mupiro | Rayson
Rayson muRayson Industrial Zone, Huasha Road, Shishan, Foshan High-Tech Zone, Guangdong, China Main zvigadzirwa Zvakanakisa Zvakanakira Kubva kuChina Yakanaka Mutengo Polyester Polystyrene Rakasonererwa Mupiro
Rayson Chitubu Matiresi Mugadziri anonyatso tevera iyo ISO9001 yepasi rose mhando chitupa sisitimu yekugadzirisa uye kudzora maitiro ekugadzira.
Isu tinonyatsoteedzera yakajairwa mhando yekudzora maitiro kuona kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana kana kupfuudza zvinotarisirwa nevatengi vedu. Uye zvakare, isu tinopa mushure-yekutengesa masevhisi evatengi pasirese pasirese. Kubva zvagadzwa, Rayson anovavarira kupa yakatanhamara uye inoshamisa mhinduro kune vatengi vedu. Isu tasimbisa yedu yedu R & D nzvimbo yekugadzira zvigadzirwa uye chigadzirwa chigadzirwa. Parizvino, Rayson apfuura iyo yepasi rose mhando manejimendi manejimendi sisitimu. Zvese zvigadzirwa zvinosanganisira yedu nyowani chigadzirwa inopihwa nehunyanzvi hwekugadzira, hunovimbiswa mhando, uye nemakwikwi mitengo.
Ndingaite sei kuti ndiwane mimwe mienzaniso, Mushure mekusimbisa chipo chedu uye titumirei iwo mutengo wekuenzanisira, isu tinopedzisa sampuro mukati me15 ~ 20 mazuva Iwe unogona kukumbira iyo yakajeka kambani kuti itore iyo sampuro kubva kukambani yedu kana iwe unogona kuti titumire DHL, FedEx kana UPS kuunganidza nhamba account, tinogona kutumira iyo sampuli kwauri neakaunzi yako. logo pane chigadzirwa? Tinogona kuita metiresi zvinoenderana neyako dhizaini kana kupa OEM sevhisi inongoda iwe kuti utipe chigadzirwa chako mifananidzo kana logo photos.May Ini ndinoshanyira fekitori yako? Hongu, tinogamuchirwa kuti tishanyire fekitori yedu chero nguva, isu tiri padyo neGuangzhou Baiyun nhandare yenyika, zvinongotora awa imwe nemotokari, uye tinogona kuronga mota kukusimudza.